Ity ny vahaolana sao very ny Apple Pencil | Vaovao IPhone
Ny Keynote farany avy amin'ny Apple dia nitondra vaovao vitsivitsy izay nanandrana namela anay handoa vava. Ny iray tamin'izy ireo dia ny fanamafisana ny tsaho efa niely nandritra ny volana maromaro, izay manondro ny fisian'ny iPad lehibe. Farany, Apple nanolotra ny iPad Pro, fa tsy tonga irery.
Miaraka amin'izany no ahafahantsika mahazo fitaovana fanampiny vita Batemy Apple Pencil, tondro iray mifantoka amin'ny sehatry ny asa ihany, na dia efa notsapain'ny mpanao sariitatra Pixar aza. Na izany aza - ary tsapanay izany raha vantany vao hitanay fa nampandrenesina azy - ity fitaovana ity dia mitondra olana lehibe: azontsika atao ny mamoy azy io amin'ny alàlan'ny faran'izay mafy.
Ny tondro hafa sy kojakoja mitovitovy amin'izany dia mitondra miaraka amin'izy ireo amin'ny fomba ahafahantsika mampiditra azy amin'ilay fitaovana mba tsy hahavery azy. Na izany aza, ny iray natolotry ny Apple dia tsy manana azy, ary satria izy io dia fitaovana fanampiny misy vidiny lafo ($ 99), Tsy ho zavatra tadiavintsika tsy hita io. Tahaka ny im-betsaka rehefa mitaky filàna izao tontolo izao, ao amin'ny Kickstarter no ahitantsika vahaolana.
Amin'ity fitaovana tsotra ity dia azonao atao ny mifehy ny Apple Pencil foana, na mampiasa azy io ianao (afaka mamela azy io ho mpanohana) na raha tsy ampiasainao (apetaka amin'ny sisin'ny takelaka ka mandeha foana miaraka aminy). Inona koa, tsy mila manala azy isika na dia miampatra ny iPad aza isika, satria ny endriny dia mamela azy io hitambatra amin'ny fomba mitovy. Noho ny fampiasana ilay mpampitohy Lightning, Quarter - izany no anaran'ny fitaovana fanampiny - dia mety ho vahaolana tonga lafatra ho an'ireo maro izay mieritreritra ny hividy an'ity vokatra vaovao ity amin'ny orinasa paoma.
Afaka mianatra bebe kokoa momba ny Quarter ianao (ary mividy ny unitanao, raha irinao) ao ny pejin'ny tetikasa ao amin'ny Kickstarter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Vahaolana feno fahendrena hialana amin'ny fahaverezan'ny Apple Pencil anao
Te hahafantatra aho raha ho an'ny pro ihany ny pensilihazo
Salama Andres. Mbola tsy fantatsika izany. Ny iPad Pro dia tsy manana efijery miaraka amin'ny rafitra fanekena tsindry toy ny iPhone 6s, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana iOS hafa izy io. Ny zava-mitranga dia mila rindrambaiko manokana koa ianao ary ilay rindrambaiko heveriko fa tsy hahatratra fitaovana hafa. Ny iPad Pro dia manana RAM 4GB ary ny iPad Air 2 ary ny iPhone 6s manana 2. Tsy mino aho fa mamorona rindrambaiko ho an'ny farany i Apple. Ho fanampin'izay, manome exclusivity ny iPad Pro izy io hanampy antsika hanapa-kevitra amin'izany.
Misaotra an'i Pablo, tsara raha niara-niasa tamin'ny hafa izy, ka angamba hivarotra pensilihazo bebe kokoa izy ireo, hiandry ny fitsapana isika.
Tsy miasa afa-tsy amin'ny Pro izy io, apetrany ao amin'ny tranonkalan'ny Apple….